टैटू संग अर्थ - टैटू कला विचार
अर्थको साथ टैटू
पक्षीहरू निःशुल्क प्राणीहरूको रूपमा चिनिन्छन् जुन धेरै मानिसहरू यसको जाँच गर्दैछन्। यो जीवनमा धेरै चीजहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ र यसकारण तपाई पुरुष र महिलाहरू यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरूले चपलता, स्वतन्त्रता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान, गहन बुद्धि, सुन्दरता, सुन्दरता, पारिवारिक, पति, आध्यात्मिक निर्देशन र अन्य धेरै पक्षी पक्षीको जोडीलाई सहभागिता गर्दछ।
बर्ड टैटूहरू सुन्दर र असाधारण डिजाइन र आकार हेर्न डिजाइन गरिएका छन्। यो कारण मानिसहरूले अरू अन्य टैटू डिजाइनहरूमा छनौट गर्ने कारण हो। त्यहाँ बर्डटोटका विभिन्न डिजाइनहरू छन् जुन विभिन्न अर्थहरू छन्। तपाईं एक पक्षी को प्रकार निर्णय गर्न को लागी एक हुनुहुन्छ जुन तपाईले आफ्नो शरीरमा स्याङ्किङ्ग गर्न आवश्यक छ। पक्षी आकार र आकृतिहरू आउँछन् र तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको बारेमा केही विशेष छ। मानिसहरू जो स्वतन्त्रता वा जीवनमा रहेका सामानहरूको अर्थमा जान चाहन्छन् यस विशेष ट्याटु डिजाइनको लागि जान सकिन्छ। बर्ड टटू शरीरको कुनै पनि भागमा स्याङ्किङ्ग गर्न सकिन्छ वा यसको अर्थ हराएको छ र यसले व्यक्तिको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम पक्षी ट्याटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मन्डला टैटू अर्थ
मंडल टैटू धेरै अर्थहरू छन् र सतावटको संकेत गर्न सक्छन्। पूर्णता र सन्तुलन र अनन्तताको बारेमा टट वार्तामा सर्कल, जब तपाई दूरीबाट सबै बिन्दूहरूलाई बीचबाट हेर्नुहुन्छ। धेरै धर्महरूले यसको विश्वासीलाई धेरै कुरा भन्न भन्न यसको प्रयोग गर्दैछ।
हिन्दू धर्म हिन्दू धर्मको अनुसार, मंडलाले मनन गर्न सक्छ। यो किनभने यो फोकसको रुपमा प्रयोग गरिन्छ र आध्यात्मिक बारेमा एक उपकरण बन्छ।
मसीहीधर्म - ईसाई धर्मले अर्को स्तरमा मंडला लिन्छ किनभने यसले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सङ्केत गर्दछ जुन चर्चको विभिन्न भागहरूमा चित्रण गर्न सक्छ र कलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बौद्ध - मन्डला बौद्धहरूका साथ गर्न को लागी केहि छ, उनि यसलाई आफ्नो धार्मिक र ध्यान अनुष्ठान मा प्रयोग गर्दछ। यो जीवनमा सन्तुलनको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मंडल टैटू भएको छ कि धेरै व्यक्तिले जीवनमा धेरै चीजहरू प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्दछन्, जस्तै आकाशको शरीर। टैटू धेरै बयान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाईं वास्तवमा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं राम्रो ट्याट स्याङ्का प्रेमी हुनुहुन्छ र एक विचार चाहानुहुन्छ भने।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम मंडला टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
टैटू अर्थ डुट गर्नुहोस्
डेभ टैटू प्रेम, शान्ति र धैर्यको प्रतीक भएको छ। यो ईसाईको लागि एक पवित्र प्राणी हो र वर्षौंको उमेरमा प्रसिद्ध भएको छ। ढोका टटू हाम्रो साथमा रहन आएको छ। धेरै मान्छे यो टैटू संग आउँन सुन्दरता गजल गर्दै छन्। ढोका संग सम्बन्धित धेरै अर्थहरू छन्। यसले प्रजनन, स्त्रीत्व र सुन्दरतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ।
यहूदीहरूले विश्वास गर्छन् कि यो विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्दछ र उनीहरूले आफ्ना विचार र विश्वासलाई फैलाउन प्रयोग गर्छन्। मसीहीहरूको अवधारणा पनि यसमा गहिरो छ। ती को प्रयोग गर्नेहरूले विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू सज्जन र प्यारी हुन्।
ढोका टटटो अर्थले संसारको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सहनशीलताको लागि ट्याटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो स्थिरता र निरन्तरताको लागि खडा छ। ढोकाको टटू सुन्दर हुनुको लागि डिजाइन गरिएको थियो। सेतो ढोका शुद्धता र निर्दोष प्रतिनिधित्व गर्दछ। सानो आश्चर्य छ कि केहि जवान केटीहरु शुद्धता र हेरविचारको चिन्हको रूपमा आफ्नो पहिलो जाँचको लागि जान्छन्। मानिसहरूले ढोकाको साथ अन्य तस्बिरहरू थप्न सक्छन् जसमा सन्देशहरू प्रयोग गर्दा डोभरी मसीको विचारको टटको फरक अर्थ बताउन सकिन्छ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम डोव टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
चन्द्रमा टटटो अर्थ
चन्द्रमा टटू एक लोकप्रिय प्रकारको मसीको हो किनकि यो प्रतिनिधित्व गर्दछ। धेरैजना व्यक्तिहरूले यो विश्वास गर्छन् कि यसले आकाशीय शक्तिमाथि प्रभाव पारेको छ र यो पनि खगोलविराममा छ, यसले इतिहास र विज्ञानलाई सङ्केत गर्छ। यस टटू को प्रयोग गर्ने व्यक्तिले माथिको अर्थमा चासो राखेन किनकि चाँदको ट्याटुमा धेरै अर्थहरु छन्। चन्द्रमा छ भन्ने अर्थको संख्या यो असाधारण बनाउँछ। यो अन्य तस्विरहरु संग तपाईं आश्चर्यजनक अर्थ दिन को लागी संयुक्त हुन सक्छ। चन्द्रमा केही अर्थहरू जादुई हुन सक्छ। जो लोग मा विश्वास गर्छन उनको शरीर को कुनै भाग मा टैटू स्याही छ। चन्द्रको चक्रवात स्वभाव यो चीज हो जसले मान्छेहरूलाई उनीहरूको शरीरमा स्याङ्किङ्ग बनाउँछ जबकि उनीहरू हुन् जसले यसो भनेका छन् कि यो लुगा र पागलपनको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
चन्द्रमा पनि महिला स्त्रीको रहस्यमय हुन सक्छ। चाँद रचनात्मकता को लागी र जो प्रजनन को लागी खोज रहे हो, यो एक उत्तम उपकरण हो। चन्द्रले पनि विकास, चकित, उनीहरूको मेमोरीको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तपाईं लोभ, दुर्लभता, विकाकन विश्वास, नकारात्मक ऊर्जा रिहाई र अँध्यारो पक्षहरू हुन्। चन्द्रमा टटूलाई अन्य वस्तुहरूसँग प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि यो विशेष अर्थ दिन।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम चन्द्रमा टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
ओक्टोपस टटूको डिजाइन आफैलाई एक आश्चर्य हो किनकि मानिसहरूले यसलाई यसको शरीरको विभिन्न भागमा राख्छन्। टैटू जटिल छ र यो पनि कसरी फरक कुरा को प्रतिनिधित्व गर्दछ। अक्टोपस को व्यक्तिगत वा रहस्यमय भ्रम को ओक्टोपस को विशेषताहरु लाई के जोडछन। पुरातन मिथक भन्छन् कि 8 को संख्या को रूप मा जीवन को धेरै पहलुओं मा महत्वपूर्ण छ। यो कारण आठजना पैरहरू शक्तिशाली रूपमा मानिन्छ। अक्टोपस रहस्यमय प्राणीहरूको यस श्रेणीमा आइपुगेको छ। ओक्टोपस ट्याटटो अर्थ पछाडी बढ्नका लागि अंगको क्षमताबाट हो। टैटू पुनरुत्थान र कायाकल्पको अर्थ हो।
धेरै मानिसहरूले यसको प्रयोग गर्नका लागि विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको पात मेट्न सकिन्छ। अक्टोपस ट्याटटो पनि अर्थमा आशा राख्छ। धेरै चीजहरु संग धेरै काम गर्न ओक्टोपस को क्षमता भनेको मान्छेले विश्वास गर्दछ कि प्राणी multitask हो। यसले पुष्टि गरेको छ कि ओक्टोपस ट्याटू उनका लागि हो जुन पुनरुत्थानको आवश्यकता छ। टैटू का अर्थ जादू, उत्कृष्ट र दुर्लभता हो। ओक्टोपसको डिजाइन पनि यसको सिर्जना गर्ने क्षमताको कारण भीडीमा उभिएको छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम ओटोपस ट्याटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
टाइगर टैटू विशेष गरी एशियनहरूका बीच सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। बाघको अर्थ यो कुराले उत्कृष्ट बनाउँछ। बाघको टैटू भनेको के हो जुन मानिस कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना बाँच्न सकिन्छ। तिनीहरू कामुक, व्यभिचार, शक्ति र शक्ति को प्रतिनिधित्व गर्दछन। तिनीहरू सौर कुलदेवहरू भन्न सकिन्छ किनकि यसको मानिन्छ कि तिनीहरू स्वदेशी शक्तिहरूद्वारा शासन गरिन्छ।
जो लोग बाघ को टैटू को लागि जान्छन् जुन जुनून को द्वारा शासन नहीं गरिन्छ किनकी उनि प्रवृत्ति मा विश्वास गर्छन। प्रेमीहरूले यो टैटू स्याउ कसरी देखाउन सक्छन् भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ। बाघलाई मृत्यु भएकाहरूको संरक्षक मानिन्छ। यो प्रायः कब्रहरू वा कब्रहरूमा देखिएका कारण हो।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम टाइगर टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
Dreamcatcher टैटू मूल अमेरिका को लागि लोकप्रिय छ। टैटू डिजाइनले मानिसहरूलाई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतीक बनाउँछ। सपनाकाचट टटूले खराब र नकारात्मक ऊर्जालाई हटाउन मद्दत गर्दछ। मानिसहरू जो डराउन चाहन्छन् खराब सपना वा सपनाहरू सपनाकोचोटि ट्याटुको प्रयोग गर्छन्। ती ट्याटुहरू स्याहार गर्नेहरू शान्तिपूर्ण र खुसीसाथ सुनिरहन्छन्। यदि तपाईं एक असाधारण टैटू डिजाइनको योजना बनाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ जुन जीवनमा यसको प्रस्तुतीकरणको बारेमा धेरै कथाहरू बताउने सपना सपनाचोटि टैटू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम सपनाकेचर्स टैटू डिजाइन विचार को लागी यहां क्लिक गर्नुहोस।
ईगल टटटो अर्थ
ईगल टटू डिजाइन को अर्थ यो चीज हो जुन तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ धेरै अर्थ छन् कि टैटू संग आउँछ। ईगल एक पक्षी हो जुन संसारको वरिपरि महिमा गरिएको छ र यसमा अनुग्रह छ। यो शक्ति, अवसर, बुद्धि, स्वतन्त्रता, भेदभाव र मजाकत्व, शक्ति, प्रभुत्व, अवसर, देवता र आध्यात्मिकताको सन्देश हो भन्न सक्छ। यसको अर्थ धेरै धेरै शक्तिहरू छन्। डिजाइनले यसको डोमिनियर प्रभावको साथ यो अद्वितीय बनाएको छ। त्यहाँ ईगलहरूको विभिन्न विविधताहरू छन् जुन उनीहरूको अर्थमा आउँछन्।
स्वतन्त्रता र संरक्षणको बारेमा ईगल वार्ताहरूको पखेटा। यदि तपाईं स्वतन्त्रता खोज्दै हुनुहुन्छ भने, एक स्याङ्किङ्गको लागि तपाईं जान सक्नुहुन्छ ईगल ट्याटू हो। सुरक्षा प्रस्ताव यो हो कि धेरै मानिसहरूले यसको प्रयोगलाई दुष्ट को हेरचाह गर्न प्रयोग गर्छन्। ईगल टटू को रेखाचित्र यस्तो तरिकाले गरिन्छ जसको मतलब यो साथ पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ। यो किन लोकप्रिय छ र दुर्लभ छ। पक्षी को दुर्लभताको कुरा भनेको संसार भरको सराहना हो। यदि तपाईं आफ्नो शरीर संग संलग्न महानता को एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न चाहनुहुन्छ भने, ईगल ट्याटू केहि छ कि प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम ईगल टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
आँखाको टटू विभिन्न संस्कृतिहरूमा प्रचलित छ र मसीहीहरूलाई मिश्रको परम्परामा पनि भिन्न हुन्छ। आँखाले सर्वोपचारिक, सुरक्षा वा स्पष्टताको प्रतीकमा तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। कसैलाई कामुक को प्रतिनिधित्व गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छ। कुनै कुरामा तपाईंसँग मनपराउने प्रकारको कुनै पनि कुरा छैन, आँखाको टैटू केहि छ जुन तपाईको प्रस्तुतीकरणमा मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं विद्रोह हुनुहुन्छ भने, आँखाले तपाईंले छोड्नुभएको छ। कुनै पनि आँखा टटूमा प्रतिनिधित्व छैन र यदि स्त्री स्त्री जीवन शैलीको सराहना गर्नुहुन्छ, तपाई आँखाको टटू संग गर्न सक्नुहुन्न।
विभिन्न प्राणीहरूको अनुहारले विभिन्न चीजहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उदाहरणको लागि लेरास र अरूको आँखाहरू, टटुट अर्थहरू छन् कि पहनने को लागि महत्त्वपूर्ण छ। आँखा टटू अति सुन्दर छ र एक भविष्यको सर्वोच्चताको बारेमा बताउँछ। आँखा एक टटू डिजाइन भएको छ जसले मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनशैलीको मूल्यांकन गर्छ। देवताहरूको सबै हेर्ने प्रकृतिलाई आँखाले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम आँखा टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
फूल टटू सामान्य छ र संसारको विभिन्न संस्कृतिमा पनि लोकप्रिय छ। परम्परागत रूपमा, फूल टटू मुख्यतया महिलाहरूको लागि हो। फूलहरूको सुन्दरता प्रयोग गरिएको फूलको आधारमा धेरै चीजहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। गुलाबी फूलको आफ्नै अर्थ हो जस्तै अन्य फूलहरू पनि तिनीहरूको अर्थ छन्। जापानी फूल टटू सबैभन्दा लोकप्रिय छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण अर्थ राखिएको छ। फूलले कामुक, प्रजनन, प्रजनन, समर्थन, सपना, जादू, प्रशंसा, हेरविचार र प्रेम को प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। फूलको अर्थले सन्देशको साथ गर्न चाहन्छ कि पहिरन बायाँ तिर जान चाहन्छ।
फूल टटू अर्थ यो प्रतीकहरूको कारणले बेवास्ता गर्न सकिदैन। अब मानिसहरू यसको लागि जादुई प्रभावहरू अन्य साम्राज्यहरू वा वस्तुहरू ड्राइभिङ्ग गरेर तिनीहरूलाई विशेष प्रकारको सन्देश दिनको लागि थप्दै छन् जुन तिनीहरूको लागि मात्र हुन सक्छ। गुलाबबाट हर फूलको फूलमा उनीहरूको अर्थ छ। तपाईं एक हुनुहुन्छ जो सन्देशको प्रकारमा निर्णय गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं जान्नुहुन्छ। फूल टटटो अर्थहरू विशाल अर्थहरू र प्रतीकहरूको कारण सबै भन्दा राम्रो हो जुन तिनीहरू संसारभरि साझा हुन्छन्। जब फूलहरू थप शब्दहरू, रङहरू र चीजहरू छन्, तिनीहरूले उत्कृष्ट अर्थ देखाउँछन्।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम फूल टैटू डिजाइन विचार को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
ज्यामितीय ट्याटटो मतलब भनेको तपाई भन्दा बढी हो। यसमा एक विशेष डिजाइन छ जुन एक आकार जस्तै हो। के यो डिजाइन वार्ता निरन्तर र सही छ। आकृति गणित संग धेरै धेरै छ र सधैं एक टैटू भएको छ कि धेरै मान्छेले परिशुद्धता, सन्तुलन र स्थिरताको प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्दछ। यो डिजाइनको तरिका को कारण भविष्यवाणी को बारेमा पनि कुरा गर्दछ।
ज्यामितीय ट्याटटो अर्थले सहभागीता र दिनचर्याको मतलब हो। ज्यामितीय प्वाइन्टको बारेमा सब्जी र आनन्दको लागि सबै कुरा, र स्याहारको बाटो पनि यो टाटको एक दुर्लभ प्रकार बनाउँछ। अधिकतर मानिसहरूको आनन्दको लागि ट्यागमा ट्याट गर्न सकिन्छ। ज्यामितीय ट्याटू त्यो पुल बनेको छ जुन उनीहरूले जीवनमा प्राप्त गरेका छन् प्रशंसा गर्न धेरै प्रयोग गर्छन्।
पुरुष र महिलाका लागि नवीनतम ज्यामितीय टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
हमासा टटटो अर्थ
हैम्स टैटू अर्थ विशाल छ र विश्वभरका विभिन्न अर्थहरू छन्। टैटू टेक्निकलले ढाँचा र प्रतीकहरू समावेश गर्दछ जसले यसलाई यो सुन्दर सौंदर्य प्रदान गर्दछ। टैटूमा पाँच जना मानिस मानव इन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो विश्वास छ कि हम्स टैटूले विश्वास, सुरक्षा, शान्तता र बहालीको प्रतीक गर्दछ। ह्यासा टैटू प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो, यो दुष्ट वा नकारात्मक चीजहरू दूर राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको राम्रो भाग्य ल्याउन प्रयोग गरिन्छ।
ह्यासा टैटूलाई धेरै तरिकामा अनुकूलित गर्न सकिन्छ जस्तै जब यो आँखामा प्रयोग गरिन्छ, यो सुरक्षा प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; होरोसको आँखा। यो मानिएको छ कि यो आँखाले मानिसहरुलाई हेर्न र दुष्टलाई धक्का दिन सक्छ। इस्लाममा, पाँच इस्लामी प्रतीकहरूको बारेमा कुरा गर्न ह्यासा टैटू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैले यो फतिमा को हात भनिन्छ। फतिमाको हात फतिमा Zahra को प्रतिनिधित्व गर्दछ। Fatima, मुहम्मदकी छोरी।
यहूदियामा, यसले उनीहरूको प्रार्थनामा पाँचवटा इन्द्र र पनि5किताबहरू टोराहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। हमासा टैटू अर्थ भनेको हो कि अधिकांश संस्कृतहरूले आफ्नो विश्वास र विचारधाराको केहि प्रशंसामा प्रयोग गरेको छ। यसको मतलब योभन्दा बढी छ।
महिलाहरु को लागि नवीनतम हम्स टाटा डिजाइन डिजाइन विचार को लागी यहां क्लिक गर्नुहोस।
बिच्छेटा टटूले संसारका विभिन्न भागहरूबाट मानिसहरूलाई धेरैको अर्थ दिन्छ। टैटू प्रतीकात्मक छ र प्रायः प्राणीको व्यवहारमा आधारित छ। यसले पुरुष मा असाधारण र कामुकता को प्रकार को नृत्य को कारण हुन सक्छ जसलाई यो मिलन को समयमा बनाइन्छ। यो म्यान्सन द्वारा सर्जरी को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ र बिच्छेदन विभिन्न धर्महरु द्वारा विभिन्न चीजहरु को मतलब को उपयोग गरिन्छ, जसलाई प्रायः दुष्ट संग सम्बन्धित छ। यो सुरक्षाको अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक लडाकूले प्रतिनिधित्व गर्दछ।
क्यान्सर बचेको धेरैले उनीहरूको क्यान्सर यात्राको कथा बताउन टैटूको प्रयोग गर्दछ। विद्रोहीहरू वा यहाँका बाकसहरूले प्रायः ट्याटुको प्रयोगलाई देखाउनका लागि हेर्छन् जुन उनीहरु हुन्। बिच्छेटा ट्याटटोले प्रतिरोध र संघर्षको अर्थ राख्दा केहीले यसलाई संवेदनशील, सम्मानित समर्पित र वफादारीको रूपमा लिन्छ। टटू पनि जुनून, बिरुद्ध, लडाइँ, सहनशीलता, सुरक्षा, दृढता, बचाव, मृत्यु, वफादारी र दुष्टबारे कुरा गर्न सकिन्छ।
तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ के तपाईं आफ्नो बिच्छेदन टटू तपाईं मतलब छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका बिस्कुट टटू डिजाइनहरू छन् जुन तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येकमध्ये तिनीहरूको अर्थ छ। तथापि, तपाईं केहि फरक अर्थ बुझ्न आफ्नो टैटूमा छुटाउन सक्नुहुनेछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम बिस्टरो टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
खोपड़ी टैटू अर्थहरू एक स्थानबाट अर्को स्थान फरक हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका खोपहरू छन् र तिनीहरूको अर्थ पनि छन्। धारणा भनेको खोपले ठूलो संख्यामा मानिसद्वारा मृत्युको अर्थ हो, खासै ठूलो हुन सक्छ जब ठूलो आँखाको गर्तिका साथ। खोपड़ी धेरै तरिकामा सारिएको हुन सक्छ र तिनीहरूले तपाईंलाई प्रेम गर्नेछन् कि महान अर्थहरूको साथ समाप्त हुन्छ। खोपड़ी टैटू कसैको सम्झना हुन सक्छ जसले मर्छ र हामी सबैले यो जीवनलाई पूर्णतया बाँच्न सक्दछ।
खोपको डिजाइनहरू पनि उनको अर्थ जस्तै लोकप्रिय चीनी कुखुरा टटू छ जसले प्राय: म्याक्सिकन खोपटा टटू वा कैंडी खोपटट टटू भनिन्छ। उदाहरणको लागि मेक्सिकोहरूले यो ठाउँको भूमिकाको कारण मृत टटूको दिनलाई प्रेम गर्दछ।
महिलाहरु अक्सर रंग प्रयोग गर्दछ जसमा मान्छे को टैटू हेर्छन र अर्थ पनि धेरै पनी हुन्छन्।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम कुपोरेट टैटू डिजाइन विचार को लागी यहां क्लिक गर्नुहोस।
सूर्य र चाँदको अर्थ को अर्थ टाटोको कुरा हो कि तपाईं स्याङ्जाको लागि जाँदा जागरूक हुनुपर्दछ। सूर्य र चाँदको टटटो विचार धेरै आकृति र डिजाइन छ जुन कुनै पनि फैशनी प्रेमी व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ। जीवनको सर्कलको बारेमा चन्द्र र सूर्यको आकार वार्ताको आकार जुन अन्त गर्दैन। जब आधा सूर्य र चन्द्रमा एक सर्कल भित्र राखिएको छ, अर्थ फरक हुन सक्छ।
सूर्यको टाटको बारेमा कुरा गर्दै, यसले शक्ति, शक्ति र पुनरुत्थानको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि चाँद टटूले केहि संस्कृतिका मा जीवनको महिला पक्षलाई संकेत गर्न सक्दछ जब यो देवी आउँछ। जब सूर्य र चन्द्रमा रंग लगाइन्छ, यी मतलबहरू तपाईले रोजेका छन रङमा आधारित फरक छ। सूर्यले प्रायः मानिसको जीवन पक्षलाई संकेत गर्दछ जुन चाँदको साथ संयुक्त हुन सक्छ जुन यिन यांग प्रशंसाहरू देखाउँछन्। स्त्री र मर्द सम्बन्ध सम्बन्धी सूर्य र चन्द्रमा टटू संग पुरा तरिकाले प्रतीक हुन्छ।
सूर्य र चाँद टटू प्रेमका प्रेमहरूबीचको भयानक इच्छाको बारेमा कुरा गर्न सक्छ। यसैले दुई आकाशीय निकायहरु को संयोजन एक अद्भुत टैटू डिजाइन हो जो कि कुनै द्वारा प्रयोग गरिन सक्छ। प्रत्येक टैटू डिजाइन अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम सूर्य र चन्द्रमा टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
सूर्य टोटोसहरू सधैं पुरातन दिनका समयमा लोकप्रिय भए। सूर्यको प्रतीक स्वभावले यो पुरुष र महिला दुवैलाई आकर्षित गर्दछ। सूर्य को महत्व या तो नकारात्मक वा सकारात्मक हुन सक्छ र यो एक व्यक्ति देखि आउँछ जहां देखि संस्कृति मा निर्भर गर्दछ। यो कुनै रहस्य छैन कि जीवन सूर्य बिना स्थिर रहन सक्दैन। सूर्यले जीवन, शक्ति, ऊर्जा, प्रेम र जीवनको समर्थन गर्न सक्छ। यसले पुनरुत्थानको अर्थ पनि गर्न सक्छ र केही धर्महरूमा पनि सूर्यको बारेमा विशेष अर्थहरू छन्। त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन् जुन सूर्यको टाटा आकर्षित हुन सक्छ र तिनीहरूका अर्थहरू छन्। उज्ज्वल सूर्यले ईश्वरीय शक्ति र महिमा अस्तित्वको अर्थ बुझ्न सक्छ। धेरै मानिसहरूले सूर्यको प्रयोग सूर्य शैतानको टैटू जस्तै खडा गर्न प्रयोग गर्दछ जुन धेरै खेलकूद प्रशंसकको प्रयोग गर्दछ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम सूर्य टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
ट्री टटटो अर्थ
ट्री ट्याटू रिसाइलिङ र लामो समयसम्मको अनुभवको प्रतीक भएको छ। रूखहरू सधैं लामो समयसम्म रहन्छन् र पृथ्वीमा एक्सनलिङ्गिङ पीढीमा 500 वर्ष सम्म खर्च गर्छन्। यसैले पेडहरू लामो जीवन र लचीला देखाउन स्याङ्जामा छन्। रूखको बल र कुनै पनि परिस्थितिमा यसको अनुकूलता भनेको धेरै मान्छेलाई के भयो? कसैले पनि आफ्नो शरीरमा टैटू स्याही गर्न सक्दछ। रूखले धेरै प्राणीहरूलाई घर र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। अरूलाई ल्याउन सुरक्षा यो उल्लेखनीय छ कि केहि हो। जो मान्छे आफ्नो जीवन मा सुरक्षा खोज रहे हो उनको स्याही को लागि उपयोग गर्न को लागि। तिनीहरू धेरै प्रकारका रूखहरू छन् फरक अर्थ र महत्त्वको साथ।
रूख पनि केही धार्मिक अभ्यासहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ किनभने यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उपलब्ध पेडहरूको सङ्ख्या र प्रतीकात्मक कार्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ, कसैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईं आफ्नो रूखमा केहि बोल्ड बयान गर्न आफ्नो संस्कृति नजिक एक रूख को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रूखको प्रतीकात्मक स्थिति तपाईंको शरीरमा तपाईंको टटूको रूख अनुकूलन गर्न अधिक अर्थ बनाउन सक्छ जुन तपाइँ कुन सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम पेटी टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
ताज टटू एक विशेष हो किनभने यसको अर्थ प्राधिकरण र शाही शक्ति हो। क्राउन धेरै चीजहरूको मालिकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जो शाही घरहरु बाट छन् सजिलै मुकुट टैटू संग पहिचान हुन्छ किनभने यो तिनीहरूको हृदय नजिक छ। संसारमा कुनै स्थानहरू छैनन् कि मुकुटको महत्त्व छैन। मुकुट टैटू को प्रतिनिधित्व भनेको केहि पनि हो कि महिलाहरु संग नहीं मिलन सक्छ।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम ताज टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
हीरा टैटूहरू राम्रो पहिचान भएका ट्याटोहरू हुन् जुन सुन्दर र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छन्। यो टैटू शरीर को धेरै क्षेत्रहरु मा देख्न सकिन्छ र यो पहिरन को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। अनुहारको टटू अयोग्य कुरा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सही चित्र हो कि टैटू दि्छ किनभने यो नाश गर्न सक्दैन।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि नवीनतम हीरा टैटू डिजाइन विचार को जांच को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
ट्याटू जीवनमा धेरै चीजहरू जीवन, मित्रता वा प्रेम पनि अनुकूलित गर्न सकिन्छ। टटूले हृदय वा ताराहरू पनि संकेत गर्दछ। इन्फिनिटी टैटू पनि केहि चीज हो जुन तपाई शक्तिशाली शक्तिशाली सन्देश चलाउन चाहानुहुन्छ जुन जनतालाई अपील गर्दछ।
कुनै पनि राम्रो यो गर्दछ जब यो अनन्तता ट्याट आउँछ। यो डिजाइन गरिएको डिजाइन र गणितीय विश्लेषण को प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन यसले कुरा गर्दछ। इन्फिनिटी टैटू एक विशेष प्रकारको सन्देश बनिरहेको छ जुन पुरुषहरूले पनि उनीहरूलाई भन्दा पहिले भन्दा राम्रो हुनका लागि उनीहरूको साझेदारलाई उनीहरूको भन्दा राम्रो समाधान गर्न प्रयोग गरेर माया गर्छन्। अनन्तता टटू फरक आकार र आकारमा आउँछ। अर्थ अझ बढि विस्तार गर्न सकिन्छ जब यो अनोखा र अधिक अद्भुत बनाउन अन्य वस्तुहरू थपिएको छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम अनन्तता टेटटोस डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
सामुराई टैटूले मानिसहरुलाई आफ्नो डरलाग्दो र साहसी पात्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्न राम्रो बनाएको छ। तिनीहरूले बल र शक्ति को प्रतीक गरे। टैटू मजेदार हुन सक्छ र मानिसहरू युद्ध र मृत्यु पनि जित्न प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। यो पहने व्यक्ति को व्यक्तित्व को बारे मा सामुराई टैटू वार्ता। टैटू पनि स्त्री बनाइन्छ र विशेष गरी महिलाहरु द्वारा हृदयमा लिन सकिन्छ। समुराईको अर्थ अरु अरुलाई बताउन सक्ने एक लामो तरिकामा जान सकिन्छ जुन तपाईं भन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ।
पुरुषहरूको लागि नवीनतम samurai टैटू डिजाइन विचार जाँचको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
सूरजमुखी टटू धेरै चीजहरू हुन्। फूल यसको संरचनाको लागि चिनिन्छ र सूर्यलाई प्रेम गर्ने, ग्रीष्मको प्रतीक वा यहाँ सम्म कि चेरी डिस्पेप्शन को एक गर्मी हुन सक्छ। यो एक फूल हो जुन सूर्यलाई समर्पित गरिन्छ र जीवनको विकास प्रतीक हुने तत्व हो। यो मुकुटजस्तै पहेंलो हुन सक्छ र यो सँधै सूर्यलाई चिन्ह लगाइन्छ। मानिसहरूले यसलाई यो वफादारी, आनन्द, सृष्टि, गर्मी र चमकको प्रतीकको रूपमा लिन्छन्।
सूरजमुखी टटू धेरै आकार र आकारमा सारिन सकिन्छ, र यीसँग तिनीहरूको अर्थ पनि छ। तपाईं एक हुनुहुन्छ जो तपाईंको सूरजमुखी चन्द्रमा को लागी अगाडी केहि गहिरो कुरा गर्न को लागी सोच्न सक्छ जुन सोच्न सक्छ। केहि मान्छे वस्तुहरु र यहाँ सम्म कि सन्देशहरु लाई पनि टैटू पनि मतलब गर्न सक्छ जो संदेश जोड्छ। धेरै संस्कृतिकाहरूले पनि सूरजमुखीको बारेमा उनीहरूको विशेष अर्थ राखेका छन्। टैटू उन मनपर्ने मध्ये एक हो जो कि आफ्नो जीवन को गर्मतम तरिका मा मामला दिखाना चाहते हो। जीवन को चमक विभिन्न प्लेसमेंट मा गर्व देखि शरीर मा प्रदर्शन को प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। शरीरको प्रत्येक भाग स्याउफ्लावरको अर्थ बताउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
महिलाहरु को लागि नवीनतम सूरजमुखी टैटू डिजाइन विचार को लागी यहां क्लिक गर्नुहोस।
Henna टैटू अर्थ
हन्नामा ट्याट्टको अर्थ पहिरनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो शरीरमा एक पुरानो पुरूष हो जसको धेरै अर्थ छ। यो खुशी, प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ र युद्ध, जन्म, आशिष् र विवाह को प्रतीक पनि गर्न सक्छ। सहज र फ्रीह्यान्डको बारे मा बात गर्न कोनेना टैटू प्रयोग गरिन्छ। हर्नाको प्रयोग गर्नु केहि चीज हो जुन तपाईंलाई आध्यात्मिक सम्बन्ध दिनेछ र यो अविकसित भावनाहरु जुन यो लागू हुन्छ।
हर्नामा राखिएको शरीरको प्रत्येक भाग यसको महत्त्व र विशेष अर्थ छ। आशिष् बारे कुरा गर्न को लागी लुगा लगाउन मा राख्न सकिन्छ र यो हातमा राखिएको बेला, यो सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्दछ र ढाल पनि यसमा थपिएको छ।
हन्ना टोटा एक टटू हो कि मान्छे को पहनने को महत्व को कारण अपवाद को लागी उपयोग को लागी उपयोग गर्दछ। त्यहाँ चीजहरू जुन तिनीहरूलाई विशेष अर्थ वा कथा बताउन तिनीहरूलाई थप्न सकिन्छ। हर्ना यसको डिजाइन र अर्थमा शक्ति हो। जब तपाईं सधैँ संसार बताउन चाहानुहुन्छ त्यो हिड्ने कथन बनाउन कोनेडा टैटू प्रयोग गर्दा भीडबाट बाहिर जाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं त्यसो गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम हेन्ना टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
बिल्ली टैटूको अर्थ धेरै कुराको अर्थ हुन सक्छ। लुगाफार्म व्यक्ति हो जसले फाइनल ट्याटको साथ के गर्ने निर्णय गर्नेछ। बिरालो धेरै विशेषताहरु को प्रतीक गर्दछ, जुन भाग्य, समृद्धि, स्त्री, शक्ति, रहस्य, रहस्य र देवता, आध्यात्मिकता, पुनरुत्थान, पछि को जीवन लिंक, सुरक्षा, अंतर्ज्ञान, खुफिया, परिष्कृत, सुन्दरता, र ध्यान शामिल छ।
बिरालो जीवनमा स्वतन्त्रताबारे कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। धेरै मानिसहरू जो विदेशी र विशेष कुरा गर्न जाने सोचिरहेका छन् बिल्ली बिटको लागि जान सक्छ। अर्थ बुझ्न महत्त्वपूर्ण र अद्भुत रूपमा ठूलो छ। बिल्ली ट्याटोहरू अन्य वस्तुहरूमा थपिन्छन् भनेर सुनिश्चित छन् कि तिनीहरूसँग पहिले सोच्न सक्नु भन्दा फरक अर्थहरू छन्। बिल्ली टटू को अर्थ पनि प्रिय हुन सक्छ किनकी धेरै महिलाहरु यसको लागि जान्छन्। यसको साथ आउँछ ध्यान दिनु अचम्मलाग्दो छ र पुनरुत्थानको महत्त्व छ कि अधिकांश मानिसहरू दिनको अन्तमा नजिक हुन चाहन्छन्।
पुरुष र महिलाहरुको लागि नवीनतम बिल्ली टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
क्रस टटू अर्थ
क्रस टटू धेरै मान्छे को धेरै कुरा को अर्थ छ। यो निम्न चीजहरु को प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, पुरुष र महिला को संघ, अस्तित्व, दया, दर्द को माध्यम ले प्यार या हानि, शांति, रियलिटी, बल, साहस, ईसाई धर्म / ईसाई ईश्वरीय, जीवन, सूर्य / सूर्य पूजा, समानता, दुःख, मृत्यु , गोथिक / गोथ संस्कृति, आध्यात्मिकता, स्त्री, समर्पण, नक्षत्र, सम्मान, अशान्ति, सांस्कृतिक / पारिवारिक विरासत र एक मायालु को सम्झना। क्रस टटू धेरै लोकप्रिय छ र यसको व्यक्तिगत, गहिरो, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व हो जुन अनुकूलित हुन सक्छ।
पुरुष र महिलाहरु धेरै कारणहरु को लागि टैटू को उपयोग गर्छन र टैटू को साथ आने वाला अर्थ को पथराव संग। अधिकांश मानिसहरू यसलाई अचम्मलाग्दो महसुस गर्न अनुकूलित हुन्छन् र तपाईं निर्णय गर्न चाहनुभएको हो कि तपाइँ आफ्नो क्रसलाई मतलब चाहानुहुन्छ। अन्त मा, यो तपाईंको क्रूस बनाउनुहुन्छ कि यो तपाईंको लागि हुनेछ। क्रस टटू धेरै वस्तुहरूमा थप्न सकिन्छ र यो सन्देश जस्तै जस्तो देखिन्छ कि परिवर्तन गर्न सन्देशहरू। उदाहरणको लागि, क्रस जुन विभिन्न आकार र आकारमा आउँछ। त्यहाँ शरीरको कुनै भाग छैन कि यसमा फिट छैन। क्रस टटूको अर्थ के हो? धेरै मानिसहरू यसको लागि फरक अर्थ छन्। तपाईं आफ्नो शरीरमा स्याङ्किङ्ग के हो भनेर थाहा पाउन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम क्रस टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि मृत टैटू डिजाइन विचार को नवीनतम दिन चेक को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस।
हृदय टटूको अर्थ जुन, जुनून र प्रेम हो। त्यहाँ हृदयको अन्य अर्थहरू छन् र यी अर्थहरू उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बाटोबाट आउँछन्। हृदयको पछाडिको तरिका भनेको अर्थशास्त्रको लागि धेरै चीज हो। रङ, आकृति र टैटूको आकार केहि कुरा हो जसले यसलाई अचम्मको सुन्दर बनाउँछ। तपाईं प्रेमको कथा बताउन यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हृदयले केही धार्मिक प्रथाहरूद्वारा पनि प्रयोग गरेको कारणले यो महत्व दिन्छ। उपलब्ध भएका हृदयहरूको संख्या र प्रतीकात्मक कार्यले यो प्रतिनिधित्व गर्दछ, कसैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। तपाईं आफ्नो शरीरमा केही बोल्ड बयान गर्न आफ्नो संस्कृति नजिक भएको हृदयको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हृदय ट्याटोहरू केही उत्तम ट्याटोहरू हुन् जुन तपाईं वरपर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुर्लभ र विशेष छ। यो सबै होइन कि तपाईंले यी टैटूहरू हेर्नु हुन्छ। जब तपाईं आफ्नो मुक्ति खोज्न को लागी टटू डिजाइन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो टैटू मात्र सुन्दर र महत्वको कारण जान्छ। हृदय टटू न केवल लोकप्रिय छ तर यो पनि प्रिय हो कि सन्देशहरू यसमा थपिने बेला हेरौं। कथा बताउन तीरहरू यसमा थपिएका छन्।
पुरुष र महिलाको लागि नवीनतम हृदय टैटू डिजाइन विचार जाँच गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
आँखा टटूसिंह टटटोहरूसूर्य टैटूहरूआस्तीन टैटूहरूचन्द्र टोटोटोएंकर टैटूहरूबहिनी टैटूहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूपक्षी टैटूहरूहृदय टटटोहात ट्याटोसअनन्तता टटूwatercolor टटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिदूत टैटूसंगीत टैटूहरूहात टाटाटोसतीर टटूप्यारा टैटूहरूछाती टैटूहरूतितली टैटूहरूआदिवासी टैटूहरूईगल ट्याटोप्यार टैटूज्यामितीय ट्याटुहरूगर्दन टैटूहरूचेरी खिलौना टैटूक्राउन टैटूहरूफूल टैटूहरूबिस्कुट टटूहात्ती टटूmehndi डिजाइनपैट टैटूकम्पास टैटूक्रस टैटूkoi fish tattooयुगल टैटूहरूओटोपस ट्याटूटैटू विचारहरूगुलाब टैटूहरूफिर्ता ट्याटोहरूबिल्ली ट्याटोहीरे टैटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूकमल फूल टटूरिप टैटूपुरुषहरूको लागि टैटूFeather Tattooटखने टैटूहेनना टैटू